राजतन्त्र फर्काउने दाउमा पूर्वराजा,भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारसँग थाइल्याण्डमा गोप्य भेट ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
राजतन्त्र फर्काउने दाउमा पूर्वराजा,भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारसँग थाइल्याण्डमा गोप्य भेट !
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०७५, बिहीबार August 10, 2018
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिवेला थाइल्याण्डमा व्यस्त रहेका छन् । ज्ञानेन्द्रसंग उनका छोरा पारस शाह वाहेक अरु सबै परिवार थाइल्याण्ड गएका छन् । नातिनिलाई क्याम्पस भर्ना गर्ने बहानामा स–परिवार थाइल्याल्ड पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यहाँ राजनीतिक भेटवार्ता गरेको थाहा भएको छ ।
पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको परिवार काठमाडौंमा भन्दा बढी अन्य जिल्लामा छ । नेपालमा छंदा पनि उनको परिवार कहिले नेपालगन्ज त कहिले पूर्वी जिल्लाको भ्रमणमा निस्किएको थियो । लामो समय नेपालगन्जमा बसेका पूर्व राजाको परिवार त्यस लगत्तै थाइल्याण्ड गएको हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम माथि टिप्पणी गर्दै आएका पूर्व राजाले थाइल्याण्डमा पनि राजनीतिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दाउमा उनले विदेशी खुफिया एजेन्सीका मानिसहरुलाई भेटेघाट गरेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नकै लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल पनि बैंकक पुगेका थिए । उनीहरुबीच चार घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ । दुई जनावीच एक्लाएक्लै बार्ता भएको हो ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण पछि सरकारमा बहुमत जमाएर बसेको कम्युनिष्टको कृयाकलाप प्रति प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विभिन्न वहानामा विरोध गर्दै आएको छ । यहि मौकामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सरकारलाई प्रहार गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उनले राजनीतिक चलखेल बढाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस लगायत केही राजनीतिक दलले वर्तमान सरकारलाई असहयोग र विरोध गरिरहेको बेलामा गणतन्त्र खारेज गरेर राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ की भन्ने डिजाइनमा ज्ञानेन्द्रको छिमेकी प्रधानमन्त्रीका दूतसँगको गोप्य वार्ता भएको आशंका गरिएको छ । उनीहरुबीचको यति लामो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो समय विभिन्न अवसर पारेर राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दै आएका छन् । ती वक्तव्यमा उनले वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व असफल भएको बताउँदै आएका छन् । जनताले चाहे राजतन्त्र फर्किन सक्ने समेत बताएका छन् ।
राजनीतिमा राप्रपा, संगठनमा शिव सेना
राजनीतिक शक्तिमा राप्रपाको एकीकरण देख्न चाहेका ज्ञानेन्द्रले युवक संगठनमा भने शिव सेना नेपाललाई परिचालनको तयारी गरेका छन् । शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत बाबा अहिले राजतन्त्रका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रहने गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रसँग छोरा तथा पूर्वयुवराज पारस शाहको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएपछि युवक संगठनको फन्डिङ, सहयोग र ठूला समुह निर्माणको जिम्मा पनि पारसले पाएका छन् ।
विखण्डित परिवार मिलाउँदै राजतन्त्रको आन्दोलनलाई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, पुराण, मन्दिरहरूमा व्यापक बनाए मात्र इतिहासलाई जोगाउन सकिने धारणा ज्ञानेन्द्रले राखेका छन् । राजतन्त्रको आधारभुत आवाज हिन्दु धर्म प्रचारका कारणले मात्र सम्भव हुने भएकाले त्यसमा जोड दिनुपर्ने ज्ञानेन्द्रको सुझाव थियो । त्यसो त भारतीय संस्थापनले पनि हिन्दु धर्म र राजतन्त्रका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा ज्ञानेन्द्रले गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राजावादी कित्ताका पत्रका अस्मिता भण्डारीलगायतको सहभागीता गराउन ज्ञानेन्द्र सफल भए ।
भण्डारी विश्व हिन्दू महासंघकी महासचिव पनि हुन् । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सक्रियताका कारण राजा ज्ञानेन्द्रको कित्ता मोदीसँग जोडिएको छ । मोदीले हिन्दु धर्मको प्रचारसँगै सहयोगको घोषणा गरेपछि नेपालमा हिन्दु धर्म कायम गराउँदै राजालाई फर्काउने भित्रि खेल जारी छ ।
ताप्लेजुङको तमोर नदीको दोभानमा छ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पक्की पुल शनिवार बिहान […]
इब्राहिमोबिचको ह्याट्रिकमा म्यानचेस्टर युनाइटेडको सहज जित
काठमाडौं । ज्लाटन इब्राहिमोबिचले ह्याट्रिक गरेपछि म्यानचेस्टर युनाइटेडले बिहिबार राती युरोपामा लिग फुटवलमा […]
देशी र विदेशी षड्यन्त्रलाई चिर्न सफल भयौँ – अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ, ६ भदौ । नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठकले अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पार्टीको नेतृत्वमा गठन […]
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना, ३ को मुत्यु
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका तामाखानीमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना भएको छ […]
काठमाडौं । संघीय राजधानीलगायत देशका ठूला सहरहरू झिलिमिली भइरहँदा ऊर्जाका लागि धनी क्षेत्र कर्णाली भने […]
गायक अनिल सिंह , सिरिश देवकोटा, निमा रुम्बालाइ सिड्निमा स्वागत , महोत्सवको भब्य तयारी
सिड्नी । आगामी सेप्टेम्वर ६ तारिख शनिबार सिड्नीमा आयोजना हुने नेपाल फेष्टिबल २०१४ मा सहभागी हुन नेपाल बाट […]